China Notebook & Sticky Notes fekitori uye vagadziri | SJJ
Notibhuku uye manotsi anonamira zvinogona kukubatsira kuti urambe uchiteedzera zvekugoverwa kuchikoro kana bhuku pamusoro peyekufarira timu timu. Zvikuru zvinopa zveboka, zviitiko zvemakambani uye zvimwe. Yakasarudzika ine rako rekambani zita kana logo, zvinokubatsira iwe kusimudzira rako bhizinesi uye brand.
Notebookuye manotsi anonamira anogona kukubatsira kuti uteedzere chikamu chekupiwa chikoro kana jenali nezveyeuchidzo dzechikwata dzaunofarira. Zvikuru zvinopa zveboka, zviitiko zvemakambani uye zvimwe. Yakasarudzika ine rako rekambani zita kana logo, zvinokubatsira iwe kusimudzira rako bhizinesi uye brand.
Mutengo unokwikwidza pakati pevagadziri varipo. Ndokumbira utipe isu zvakadzama kutaurwa, zvakare huwandu nemifananidzo; isu tinokuraira iwe yakanakisa mutengo panguva yedu yekushanda nguva. Kumirira kubvunza kwako uye isu tinoita shuwa kuti hauzonyadziswe.
Tsika zvinyorwa & memo inonamira chinyorwa
Huru huwandu hweanonamira manotsi mune akasiyana maumbirwo, mavara, uye zvimwe
Yakasarudzika inonamira yakagadzirirwa kushandiswa pabepa kana mune vanoronga
Dhizaina uye gadzira yako wega tsika dzakadhindwa zvinyorwa nemifananidzo yako
Yakanaka sevhisi, mutengo uye mhando, kukurumidza kuendesa
Zvadaro: Penzura Sharpener
tsika dzakadhindwa zvinyorwa
memo inonamira chinyorwa